Izinto ezintsha ze-PE
Iveliswa ngezinto ezintsha ze-granular ekrwada kwaye ayinalo ivumba elikhethekileyo.
Umgangatho osebenzayo ongatyibilikiyo
Imigca icacile kwaye igcwele, kwaye ukungalingani kucacile ukonyusa ukungqubana.
Ukubonelela ngeKhaya uthotho lwemibala ehambelana nomdlalo
Imibala eyilelwe bhetyebhetye, sukukhetha izitayile ezilula kunye nefashoni.
Iipateni zamagqabi eziyilwe kakuhle
Uphuculo lwesikhunta esulungekisiweyo, uyilo olutsha olumilise okwezinyo.
Ukunyanzeliswa kwe-elastic kulula ngakumbi
Ubuninzi be-PE izinto eziluhlaza zenziwe amagwebu, kwaye isiphumo sokunyuka kunye nesothuso sokunyusa siphuculwe.
Egqithileyo Igwebu yokugoba i-gymnasium ubugcisa bemfazwe ukulwa ne-Sanda uqeqesho lokuzivocavoca uqeqesho oluphezulu olungashukumiyo umdaniso wobugcisa bemfazwe
Okulandelayo: Ukuthunga kwabantwana amagwebu ukhuko lomntwana okuqinileyo umbala iphazili eva mat umntwana ongatsibiliki
iveliso ezifakiwe, Imephu yendawo, AMP Iselfowuni Umgangatho wePuzzle wePuzzle, Umgangatho wePuzzle wokuzilolonga iMat, Umgangatho wePuzzle Mat Cushion, Umgangatho wePuzzle yePuzzle, Umgangatho weMat Puzzle, Umgangatho wePuzzle, Zonke iiMveliso